Ndewo ohuru site na tank shark? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Ndewo ohuru na tank shark - ihe ngwọta dị irè
Ndewo ohuru na tank shark - ihe ngwọta dị irè
Ndewo ohuru site na tank shark?
Ndewo ohuruadịghị naShark tank
Ndewo ohuruapụtaghị naShark tank. Agbanyeghị, onye asọmpi nkeNdewo ohuru, Plated, pụtara naShark tankna May 2014 wee gbata ego site n'aka onye na-etinye ego Kevin O'Leary.Ndewo ohurumalitere site na ego mbu site na Rocket Internet, nke bu onye ahia ahia e-commerce nke German.12.02.2021
Eeh. Gwa anyị gbasara ya. Ya mere, anyị abụọ na-azụ ahịa ahụ ugbu a.
Anyị abụọ nwere ọrụ nkịtị. Ana m aga ụlọ akwụkwọ. Agam abu onye ohuru na ulo akwukwo sekọndrị.
Nna m na-arụkwa ọrụ ahịa ọgwụ. Taa, anyị nwere mmekọ n’onwe anyị na otu n’ime ụdị ndị a kacha mara amara maka teepu ndị na-ese ihe, ha na-ewetakwa anyị n’ebe 55,000 ha nọ gburugburu ụwa. Ha ewerela anyị gaa ebe 250 Meijer na Midwest.
Ma anyị bụ otu n’ime nnukwu ngwaike ngwaike-arụ ọrụ n’ụwa nile n’ime kesaa asatọ. Na onye nzuzo anyị na-akpọsa anyị na-ewetara anyị ebe 2,000. Ọ dịkwa mkpa ịmara na anyị enweghị iche iche na onye a.
Na-akwụ gị a ikike ego maka ibe iberibe? Mba, ọ bụ akara nke onwe, yabụ anyị bụ nrụpụta. Ya mere ị na-emepụta maka ha? Ee, yabụ anyị nwere usoro mmekọrịta anyị na Nashville, Tennessee nke na-ejikwa usoro nnabata anyị yana nkwakọ ngwaahịa yana ntinye akwụkwọ EDI niile. Ha na - eme - anyị gafere - ahụrụ m nwatakịrị a n'anya.
Ahuru m ya n'anya. Mycoskie: Okwu ndị ahụ na-abụ nzuzu! EDI - Amụtara m na n'afọ nke ise m na Toms, anyị dị ihe dị ka 70% n'ịntanetị na 30% na mkpọsa maka ire ere anyị n'ime afọ abụọ gara aga, nke $ 150,000 ahụ na afọ gara aga na ọkara na $ 70,000 a afọ. Anyị nwetara mbupu ọzọ ma anyị na-aga nke ọma $ 400,000 na ahịa afọ a.
Nke a magburu onwe ya. -Nsogbu. Dịrị gị mma.
Ngwunye atọ ahụ tara gị ego ole? $ 1.99 rutere. -Inye nkwakọ ngwaahịa? Ee, na mbufe.- Ya mere $ 1.99. -Landed.
Otu iko wetara anyị cent 90. Ọ dị mma, gịnịkwa ka ị na-ere? Anyị na-ere ahịa otu otu maka $ 1.89 ma na-ere maka $ 3.99 na $ 4.99 site na $ 9.99 na $ 12.99.
Ọ na-abụkarị na 'Shark Tank' ma ọ bụrụ na ị kpọtara nwa gị nwoke, ọ na-abụkarị pitch na nwa nwoke na-eme obere ngosi ma ha gafee n'ihi na ọ ga-esi ike na tank. Carson na-ekwu okwu niile. I kwughi ihe obula.
Ị ma nke mere? Enwere m ntụkwasị obi zuru ezu na ya. Anyị na-agba ahịa a 50/50. Ọ maara ihe ọ na-eme.
Mụ na papa m gara ịzụ ahịa. Agara m papa m gaa nzukọ ndị ahịa. A asịwo, anyị abụọ na-abata.
Ọ na-ele m anya n'anya nwụrụ wee sị, 'Oh, ị kpọtara nwa gị. Ọ nwere ike ịnọdụ ọdụ na paseeji. 'M wee sị,' Ee e. ' Ya mere anyi weputara oche n’onu ulo nzuko a ma m na-eduzi nzuko.
Oh, ọ pụọ, o jidere oche
Mycoskie: Mma! ọ dọkpụrụ ya n'ime ya.
Ọ dị umeala n’obi. O nwere patenti ano, okay? Nlereanya ihe eji arụ ọrụ na iko TouchUp. Chaị.
Na atọ aghụghọ na muffin, bagel na donut ọhụrụ. Are dị afọ iri na ise ma nwee ikikere anọ. Eeh.
Ndị a bụ ngwaahịa atọ kachasị ọhụrụ m - Muffin, Bagel, na Donut Fresh. Are bụ nnọọ akụkụ nke onyinye a. A na-eme ha iji chekwaa muffins na bagels na donuts ọhụrụ ụbọchị atọ ruo anọ karịa oge nkwakọ ngwaahịa.
Yabụ ị na-atụfu nke ahụ? Eeh. Don't naghị ere ndị ahụ? Nke ahụ bụ ihe dịka 5% nke ahịa anyị. Carson, ọ bụ ibu nnukwu ịmatakwu ụzọ ị mara ụzọ gị gburugburu.
Blake, amụtara m okwu 'ịtụ', 'aha nzuzo', ị mara, 'nkesa' na 27. Ọ na-atụpụ ha. N'ihi na ị hụghị 'Shark Tank'.
Eeh. Mycoskie: Ọ ga-amasị m inyere gị aka ịmalite azụmaahịa a ka m wee nwee ike ịnye gị onyinye. Ha na-ana $ 150,000 maka 10%.
Ọ ga-amasị m inye anyị ntakịrị ntakịrị ego, obere ụzọ ụgbọ elu, n'ihi ya, m ga-achọ ime $ 200,000 maka 25%. Chaị. Daalụ maka onyinye a.
Nwoke a mere onyinye ka mma karịa ka m ga-achọ ma achọrọ m inye $ 100 - Carson kwesiri ịnụ ọnọdụ ịrịọ. Mba, mana achọrọ m inye $ 150,000 maka 25%, ma ugbu a, o mere ya - o mere $ 200,000 maka 25%, yabụ a manyere m ịkwụ $ 200,000 maka 17.5% iji belata ụkwụ ya n'okpuru ya.
O'Leary: Ee! Ee! Ọ bụ eziokwu? Anaghị m egwu egwu. Daalụ maka onyinye a. Nke ahụ bụ nsogbu na-adọrọ mmasị nke ị nwere, Carson.
Oh Kedu shark. Ndị Cubans: Agam eme ya ụmụ okorobịa.
A hụrụ m gị n'anya. Are mara mma. Ma ụmụ okorobịa a bịara na nnukwu azụmahịa, yabụ abụ m maka ihe ndị a - Daalụ. - Daalụ, Mark. - Daalụ maka oge gị.
Nsogbu m bụ nke a - Achọrọ m ka Carson kwụsị ma bụrụ CEO. Carson: Emechara m klas nke asatọ. Echeghị m na nke ahụ bụ nhọrọ n'oge a. 00: 04: 07.914,00: 00: 00.000 Anọla m.
Ndi nwe Ndewo ohuru?
Ndewo ohuru/Nzukọ umbrella
Abụ m onye nchoputa nke hellofresh ụlọ ọrụ m nwere olileanya na ọtụtụ n'ime gị anụla banyere ya, ma ọ bụrụ na ọ bụghị. Adịghị m ewe iwe na ụnụ maka ịhapụrị ọha na eze ọtụtụ oge ndụ anyị, mana anyị emeela ụfọdụ ihe ịtụnanya dị ịtụnanya kemgbe ọtụtụ afọ ma anyị na-amalite ugbu a, echere m na ọ bụ oge iji mepee obere gosikwara ndi mmadu akuko anyi tupu m gwa gi ihe anyi n’eme ugbua, ka m guo ihe n’olu dara ohia Anya anyi nwere mgbe m chotara onye clicker i nwere.
Ya mere, daalụ, ọhụụ anyị bụ ịmepụta ụdị nri zuru ụwa ọnụ maka ndị na-azụ ahịa gburugburu ụwa. Anyị ọhụụ bụ ihe ọ bụla na-erughị oruru nke a kpam kpam ọhụrụ na oke Atiya na nri ahịa. Anyị chọrọ ka ezinụlọ ọ bụla na-eri nri ha esi nri n'ụlọ na-enweghị nsogbu na-echepụta nri abalị n'etiti izu site na ịmebi usoro ịzụ ahịa ọdịnala n'oge oge dị mma n'izu ahụ mgbe ị maara ihe anyị na-eme ma ị na-ekerịta ọhụụ ahụ na nke anyị Ọ bụrụ na ị jiri ọhụụ, ị ga - achọpụta na anyị nwere ike ịbụ ebe anyị chọrọ ịnọ na 20%, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ileba anya na traction anyị hụgoro, ọ bụrụlarị ụdị azụmaahịa nke ndị otu ndị ahịa na - ewu ewu nke ọma na anyị na-agbanwe agbanwe mgbe niile iji mepee ahịa a na-ekwu okwu.
Otu n'ime ihe mere hellofresh bụ n'ezie ọnọdụ kachasị mma n'echiche m ugbu a bụ na anyị na-arụ ọrụ na ngalaba kachasị ukwuu ị nwere na ịzụ ahịa nke bụ ihe oriri ma ọ bụrụ na ị jikọtara njem ejiji na dịka ụlọ ọrụ ise ndị ọzọ ị ga - afọ obere ka ị buru ibu ụlọ ahịa. Ọ bụ ego kachasị ego maka ezinụlọ ọ bụla nọ n'ụwa, ewezuga ego ma ọ bụ mgbazinye, ọ gaghị aga ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ị dị obiọma dịka anyị siri gbanwee kemgbe ọtụtụ afọ, ị ga - ahụ na anyị na - anwale otutu ma jiri nwayọ nwayọ chọpụta n'ezie ihe ndị ahịa na-amasị na mgbe ahụ ka ị si mara, ozugbo anyị chọtara ụdị azụmaahịa kwesịrị ekwesị, ozugbo anyị chọtara ndị levers kwesịrị ịbanye na gas, yabụ ugbu a, anyị na-ewepụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1 nde nri kwa izu, nke mere na a na-eri nri obere obodo niile, ha niile na-eri anyị n'otu aka nke dị ọtụtụ na nke ọzọ nke dị obere, ebe anyị na-arụsi ọrụ ike na mpaghara asaa dị iche iche, ụfọdụ kachasị tozuru oke ahia e-commerce n'uwa andwa ma ịmara na nke a bụ US Germany, Netherlands, UK, Belgium, Austria na Australia ọtụtụ na ọtụtụ ụlọ ga-eto ma anyị ka na-ebido, ihe anyị na-eme dị ezigbo iche - ma ọ bụ na ọ bụghị ezigbo iche, mana na mbido ọhụụ anyị ugbu a, ọghọm umers na-ahọrọ ahịhịa kwa izu nke kwekọrọ na ọnụ ọgụgụ ezinụlọ ha na mkpa ha maka ọnụ ọgụgụ kwekọrọ na nri ha chọrọ wee wepụta ihe niile n'aka ha kwa izu. Iji mee ka ihe ha na-eri, ha emeela ka anyị rụọ ọrụ nke ọma. na akụrụngwa dị mkpa ugbu a na echere m na nke ahụ bụ n'ezie, ọ na-esiri ike i toomi ma sie ike i imitateomi maka onye ọ bụla chọrọ ịsọ mpi na anyị, anyị nwere ike izute na ọnụ ala, anyị nwere ike nweta ihe ahụ nye gị ngwa ngwa karịa onye ọ bụla , ma anyị na-etinye ego dị ukwuu na teknụzụ iji rụọ ọrụ iji jikwaa uru asọmpi ahụ.
Etuuru m aka n'ahịa ahụ obere oge tupu enwere ọnụọgụ ọnụọgụ ọzọ ebe a, dị ka m kwuru, na-arụsi ọrụ ike na mba asaa, asaa n'ime ahịa e-commerce tozuru oke n'ụwa, yana ụlọ ọrụ nri ụwa naanị na ahịa ndị ahụ na-egosi akaụntụ n'ihi na ihe karịrị ijeri abụọ n'ime ha Groceries Around A Trillion Ọ bụrụ na ị na-ele anya na anyị penetration udu, ị maara na ha na-erughị 0.1%. Ha na-abụkarị ihe na-erughị 0.01% nke ezinụlọ niile na anyị nwere ike ịbanye n'ime ụlọ maka uto na ahịa anyị dị ugbu a na nke ahụ bụ ihe anyị kpebiri ime iji gbasaa ahịa ndị ahịa n'ọtụtụ akụkụ dịgasị iche site na oge ngwa ngwa iji nweta nri gị. ruo n'ókè nke inwe ọtụtụ nhọrọ iji nwee ike ịnye gị windo nnyefe akọwapụtara nke ọma nke 60 ruo 90 nkeji, yana n'ụfọdụ mpaghara obodo anyị na-arụ ọrụ na ya, ị nwere ụdịrịrị ụdị na ụdị ụfọdụ ha na ụfọdụ nke a ọdịdị ala iri ihe atụ London ị nwere ike ịtụ na ị ga-enweta gị akpa igbe abụọ ka ụbọchị atọ gasịrị mgbe a igbe bụ ihu ọma a nhọrọ si a menu na iri nri ị nwere ike họrọ atọ ma ọ bụ ise i nwere ike ime ha na a 90 nkeji - Oge nnyefe nnyefe natara.
Anyị arụpụtala ọrụ nke lọjistikị nke ikpeazụ anyị ị maara n'ezie ga-eme ka ahụmịhe ndị ahịa mekwuru ka ọ bụrụ oge ọzọ site n'inwe onye nwere isi ọhụụ na hel nke ọhụụ ọhụrụ na-enye gị ngwugwu ahụ ma kwe ka ị mee ya Iji sie nri n'ezie ezigbo nri gị na onye òtù ọlụlụ gị ma ọ bụ ezinụlọ gị dịka m kwuru na anyị ka na-eche na ọnụọgụ ọnụọgụ dị oke ala Ange, yana isi egwuregwu ahụ na-ezube ịba ebe ahụ site na ịbawanyewanye ebe m chọrọ ịbanye. Yabụ ọ bụrụ na anyị jisiri ike bulie ịbanye na ọkwa dị ala, ekwesịrị m ikwu ebe anyị nọ ugbu a, dịka ihe anyị na-ahụ n'ọtụtụ ahịa ndị mepere emepe maka ụdị a dịka Sweden ị nọ ọdụ na ụlọ ọrụ nwere otu Ahịa ikike nke ihe karịrị 10 ijeri, ọ bụ banyere ịbawanye iguzosi ike n'ihe ndị ahịa, n'ikpeazụ ọ bụ ihe gbasara afọ ojuju ndị ahịa nke pụtara na ndị ahịa nwere ike ịkagbu kwa izu nwere ike ịwụli nwere ike ịsị na achọghị m igbe gị n'izu na-abịa nke pụtara igbe ọ bụla anyị zigara anyị n'ihi na Onye ahịa bụ ohere ọzọ anyị nwere ike ịmasị onye ahịa, mana n'otu oge ahụ ịmara na ọ ga-efunahụ onye ahịa ahụ, yabụ ọtụtụ ndị kachasị mma anyị ga-etinye ọtụtụ akụ iji hụ na igbe ahụ meghere. igbe Ezi ntụziaka, àgwà nke Efrata wdg bụ n'ezie elu na na ị ga-ahapụ mmechuihu, ma na-ịtụ anyị igbe, wi r n'ezie mara mma nke ukwuu ịtụnanya mara mma ịtụnanya njigide ọnụego n'echiche na ozugbo ndị mmadụ na-na omume nke ịdenye aha anyị na atụmatụ anyị enwere ntakịrị ntakịrị na ihe kpatara nke ahụ bụ n'ihi na enwere nhọrọ ndụ maka ndị nwere ike isi nri n'ụlọ ugboro atọ ma ọ bụ ise n'izu Anyị chọrọ n'ezie ịnye ngwọta kacha mma, ọrụ ọrụ zuru oke iji nye gị ahụmịhe kachasị mma, yabụ kama iche echiche banyere ihe ịchọrọ iji sie nri kama iche banyere ya, ebe ị ga-enweta ihe a, ego ole ị ga-azụ ya, ndị a bụ akụkụ niile ị nwere ike ịchụpụ maka anyị gbakwunyere ihe niile nnyefe na nkasi obi nke na-abịa na ya, dịka m kwuru na mbụ, n'ọtụtụ oge, anyị na-ebu ọnụ ọgụgụ dị nta nke ahịa a na-ekwu okwu, mana ọ bụrụ na m jiri ya tụnyere mmalite anyị, anyị emeela nnukwu mmụba ma gaa n'ihu na-agbanwe agbanwe Izu ụka ọ bụla izu abụ m eche na otu n'ime mmejọ kachasị njọ m ga-eme mgbe ị na-atụle ụdị azụmaahịa ọhụrụ na-ekwu hey ihe ụmụ okorobịa na-eme taa bụ ihe ha ga-eme n'ime otu afọ abụọ na afọ atọ site ugbu a.
M na-ejikarị ya atụnyere onye na-arụ ụgbọ ala ma ọ bụ onye na-emepụta kọmputa nke na-ewepụta ahịrị ọhụrụ nke ngwaahịa ha kwa ọnwa ole na ole kwa afọ ole na ole maka anyị nke ahụ bụ izu abụọ ọ bụla, anyị na-emeziwanye ahụmịhe niile ị nwere na hellofreshand were ị maara ị na-enweta nsụgharị ọhụrụ ma ị dị elu karịa gị yabụ enwere ọtụtụ ndị nọnyeere anyị ogologo oge ma echere m na ha nwere ike ịgba akaebe ma gbaa akaebe na anyị na-anwa ịmegharị ọhụụ na melite ọrụ ahụ site na ụlọ nnukwu ụlọ ọrụ a, nke bụ isi nke atọ ebe a bụ, ọ bụrụ na ị lelee ndị ahịa anyị, ọ bụ afọ 30 ruo 50 ndị nwere ụfọdụ amụma na ndụ ha, ndị nwere ike itinye aka na isi nri ugboro atọ ugboro ise n'izu. na maka ụmụ nwoke a anyị chọrọ n'ezie ijide n'aka na ọ nweghị ihe kpatara ya yingzụta nri abalị ndị ahụ ebe ọzọ n'izu ahụ, mana ụzọ maka ọdịnihu bụ n'ezie ịsị na anyị chọrọ ịbụ ndị ọhụụ n'echiche nke w Achọrọ ịnye ya na isi ọnụahịa dị iche iche, anyị chọrọ ịnye ya na nhọrọ ndị ọzọ na nhọrọ nnyefe ndị ọzọ ma were isi n'ụzọ dị otú a ga-ebuwanye ibu ahịa a na-ekwu okwu na nke ahụ ga-enye anyị ohere ịbịaru ụdị uru karịa karịa anyị dị ugbu a. Oke dị na igbe nke ọ bụla dị ịtụnanya ma na igbe ọ bụla anyị na-ere ma ị hụla uto site na mbido nke na-enyere anyị aka inweta oke, nke ahụ bụ iji chịkọta ya eche m na hellofresh ihe anyị na-emegharị bụ nnukwu ohere na mpaghara ikpeazụ nke ụlọ ahịa, mpaghara ikpeazụ nke na-anọghị ebe ahụ agbanweela site na ntanetị gaa n'ịntanetị, ọ bụ ahịa ahịa ma echere m na anyị bụ ndị na-ewere ọnọdụ, iji merie ụdị a na ohere nha nara ekele m
Ego ole ka Hello Fresh bara uru?
Ihe ruru ijeri $ 1.6,Ndewo ohurubukwesịrịihe karịrị okpukpu abụọ kaukwuudị ka Blue Apron na $ 800.Ndewo ohurunwekwara oke ego na ọghọm dị ala karịa Blue apron.02.11.2017
Ọ bụ HelloFresh agha megide Blue apron na ole ego ị na-azọpụta n'ezie site ịzụ ot nri. (Ugwu olu ala) Ndewo. Abụ m onye ọrụ YouTube, Matt Granite, ana m anọnyere gị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị ọ bụla iji chekwaa ego karịa onye ọ bụla ọzọ.Enwekwara m freebies karịa onye ọ bụla na YouTube na agbanyeghị na anaghị m enye igbe nke Blue Apronor HelloFresh, ihe m choro bu na amutara m na oburu na inyefe igbe efu, i ghaghi iju ya tupu akughari ndi otu ozo n'izu na-abia abughi n'efu, ma karie 50 dollar amazon - Onyinye onyinye ihe dika $ 19 ihe na-erughị otu izu HelloFreshor Blue Apron wee gaa n’ihu, nke a bụ ego m nwere olile anya na ị ga-enwe, n’oge m ga-anwale Blue Apron na HelloFresh ugbu a enwere otu onye mmeri doro anya na m ga-enye gị full unboxing na tụnyere na otu onye nke m oké ndị ọrụ ibe na TV n'ezie na-aga isonyere anyị na n'etiti isiokwu n'ihi na ha Blue onu ogbom Unboxing.
Ekwesịrị m ịkọwa kwa Ọ dị mkpa iburu n'uche na HelloFreshor Blue Apron anaghị akwụ anyị ụgwọ ka anyị kwuo maka ha, ma ọ bụ na anyị enwetaghị ihe ọ bụla, nke a bụ iji kụziere gị gbasara ọdịiche dị n'etiti abụọ ahụ ma ma ha enye nri. ndenye aha ọrụ. Kwụ ụgwọ dollar asatọ ma ọ bụ iteghete bara ezigbo uru dollar gị tara ahụhụ. Ka anyị gaa n’ụlọ m.
N'adịghị ka Blue Apron nke a bụ ntakịrị ihe ahaziri ahazi ma ha gbanwere nha nke kaadị ntụzịaka ka kaadị ntụzịaka ahụ buru nnukwu ibu ugbu a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ etu akwa ebe, nke bụ mgbanwe dị mma. Get nweta onyinye ha ọzọ. N'ebe a, ha na-akwado nkwado ụgwọ mbupu ha mgbe ụfọdụ. (Akwụkwọ wrinkled) Ma mgbe anyị meghere nke ahụ, anyị ga-eri nri niile.
Anyị nwere penne nwere igba, ọkụkọ siri ike na veggies, na steak warara New York. N'okpuru oyi a gwara mmanụ ị nwere ngwugwu ice, wee bịa anụ, anụ ọkụkọ, nri mmiri ga-adị, na ihe na-atọ ọchị bụ na mgbe mbụ m nyere nwunye m iwu ka ọ rụgharịa igbe a n'ezie n'ihi na ọ maghị ebe ahụ bụ akụ na ala igbe ahụ, anaghị m ata ya ụta. N'ọnọdụ ụfọdụ ị ga-ahụ akara ngosi HelloFresh na ihe ndị dịka ị ga-anọ na steak, mana n'ezie na ọkụkọ ha na-agwa gị ebe ha si, ọ na-abụkarị oke mma, aha mmado nwere ha.
Anyị ga-egosi gị Blue Apron n'otu ntabi anya, mana ha na-akwakọba ihe niile n'otu igbe, HalloFresh na-agbaji ihe ndị ahụ ka ị ghara ịchọ site na ha wee chọpụta ihe na-aga. Kaadị nhazi ọ bụla depụtara oge ịkwadoro m chere na ọ bụ eziokwu, oge nri zuru ezu, kalori gụọ ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe ị na-arụsi ọrụ ike na ya, ha anaghị agafekarị calorie 800. Achọpụtala m na ha na-adịkarị n’etiti calorie 600 ma ọ bụ 700.
N'ime usoro nri atọ dị n'etiti ọkụkọ, penne na ibe anụ, m ga-ekwubi penne nke bụ n'ezie ihe kachasị sie ike na m na-eji okwu a egwu egwu n'ihi na ọ bụghị nke ahụ siri ike n'echiche m. M ga-emere gị ya. Nzọụkwụ isii maka nke a, n'ezie usoro isii maka onye ọ bụla, yabụ m ga-agabiga nke a ma anyị ga-erikọ nri n'oge ọ bụla.
Ka anyị mepee (igbe anya mmiri) Ma igbe niile na-anọkwasị, a na-enwekarị akwụkwọ mmado abụọ na mgbe n'ezie ikwafu nsogbu. Ọ dị mma na anyị nwere ọtụtụ akwụkwọ nri, ị ga-enweta penne, tomato mkpọ, yabasị nke dị mma, n'ezie abụọ eyịm, tomato, ezigbo ụdị ebe ọ bụ na a bụ oge oyi, parmesan na, dịka ị pụrụ ịhụ, nke a bụ akara HelloFresh. You nweta ose chili were sie ata nke dị mma n’ezie, esetịpụla gị ya, ok, veggies bụ ihe niile? chopped, ka anyị gafere na stovu ahụ, penne dị njikere, yana ị nwere ike ịhụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ elekere abụọ nke ụtụtụ, ana m akwado ọrụ maka nke a bụ nri ụtụtụ m.
Nke ahụ na-eme mgbe ị nọ n’abalị. Ọ dị mma, pancetta na-abịa na Li Peppers. (Brizzling) Ma ugbu a, ọ bụ oge tomato.
Amaghị m ihe kpatara m jiri kwuo na obi ụtọ, nke ahụ bụ ntakịrị ihe osise, mana ka anyị gaa. (Brizzling) (scraping) Ọ dị mma inine, m maara na ọ dị ka anyị nwere tan, mana echere m na nke a ga-akpọnwụ. N'ikpeazụ penne.
M tinyebeghị chiiz ọ bụla, mana oge ntinye oge 30 na-emetụta ma ọ dị ka ọ dị. Odi nma, ka anyi tinye pantieti na ngwakọta ma mee nnwale obere uto. Ọ dị ezigbo mma.
Enweghi nkwakọ ngwaahịa na Blue Apron, nke pụtakwara ntakịrị mgbagwoju anya banyere ihe na-aga na ihe, dịka m gosipụtara gị na nchịkọta HelloFresh, ị ga-enweta ya iche iche galik a na-agbachapụ maka gị dịka nhazi. Ihe onu ahia Blue bu na ha zitere gi oke galiki ma kewaa ya n'etiti usoro nri. Ha tinyekwara ihe niile ọnụ n'igbe ahụ kama ịkekọta ha iche iche.
Eeh, ị ga - ama etu esi esi nri, mana ọ bụ ọrụ karịa. Aga m asị na ike okike na uru ngwaahịa ndị enyere na HelloFresh dị, na ahụmịhe m, ụzọ n'ihu Blue Apronin. - Yabụ nke a bụ ahụmịhe m kachasị acha anụnụ anụnụ
Ọ bụụrụ m ihe dị iche n'anya na nri na-abata na igbe ma ọ dị mma, mana m ga-abụ onye kwere ekwe. Ya mere, nke ahụ bụ ihe. Ọ bụ salad, ya na burger ị nwere salad n’akụkụ, karọt, ndị a bụ buns anyị, ha bụ obere squash naanị ime ihe n’eziokwu, ha nyere anyị otu tọn cheddar? Chiiz nke m chere na ọ bụ maka bogers, nke ahụ bụ ihe ọchị maka m, shalọ.
Ọ dị mma otú ahụ, esi m ndị na-azụ blọgụ ma ha adịla njikere. Echeghị m na ha nyere anyị cheese zuru oke yabụ m nyere Alex cheddar ahụ dum wee nweta American na nke m, nke ahụ bụ naanị ihe m ga-ekwu ezughi oke, ọ dị ka obere obere chiiz. Caramelized eyịm dị njikere, M nwere salad dị njikere. - M guzo n’akụkụ arịlịka ọkacha mmasị m na nnukwu ọkà mmụta ihu igwe, Hollie Giangreco. - are dị mma n’ebe m nọ. - M hụrụ gị n’anya, Hollie. - Ahụrụ m gị n'anya karịa. - Dabere na ule gị, abụrụla m onye nnọchi anya Blue maka ihe dị ka ọnwa isii ugbu a, agbalịrị m Jackie, agụụ na-agụ m mgbe niile. - N’oge ziri ezi na ọ dị m ka enwere m nsogbu njikwa akụkụ ma ọ bụ na agụụ na - agụ m - Maka ndị gị nke na - ahụtụbeghị Hollie ma ọ bụ na - ele akụkụ dị iche iche nke mba ahụ karịa ka ọ na - agbasa ozi, ọ na - esi nri na TV.
Ọ na-esi nri na TV ruo ọtụtụ afọ. Ihe omuma ha ndi ozo bu banyere isi nri ma oburu na ereghi ha, obughi m. - Ziri ezi.
Ebe m chere na m na-ahụ ohere ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga n'akụkụ njem nke nri ma ọ nwere ike gbalịa ihe ị na-enwetụbeghị, mana m ga-enwe obere ụjọ banyere oliv abụọ maka salad. oliv abụọ. Ugbu a, abụ m ụdị, abụrụ m nwa agbọghọ Italia, abụ m onye isi nri m na-anụ ụtọ mgbe m na-aga, kedụ ihe bụ ọkụ mmụọ? s oliv abụọ? (chịrị ọchị) Echere m na mkpụrụ oliv ojii niile nwere ike, ma ọ bụ oliv ojii, nke ahụ adịchaghị mma, otu ihe niile nwere ike ịbụ ihe na-erughị dollar, o nwere ike ịbụ dịka 79 cents. - Ee, nke ahụ ka ziri ezi.
Site na dere na ọ nwere ike ịbụ naanị 12 cents, na-akpasu iwe - mana anyị bụ ezinụlọ nwere mmadụ anọ. Nri atọ maka ezinụlọ nke mmadụ abụọ bụ $ 60. Na $ 120 ihe ọ ga-abụ ma anyị rie nri atọ a, enwere m ike ịga akụ na ụlọ ahịa.
M pụtara, hapụnụ m, Mat. - N’ala na ala ndị ahụ - You na - eme ya ma bụrụkwa igbe a ma ama nke m gbalịrị, igbe a ma ama nke na - efu $ 109 ma e jiri ya tụnyere $ 120 - Ọ dị mma - m na - ekwu, dịka ị hụrụ akụkụ ụfọdụ - Don ’ t ọbụna gwa m ọtụtụ ihe ndị ọzọ? - Ee, ọ bụ ya.
Dị ka mmadụ anọ ọpụpụ ngwa ngwa ma abụ m nnukwu, a na m ekwu na ị ga-ahụ ka m na-eri nri - Yabụ na ị hapụrụ nri? - Oh chere, nke ahụ abụghịdị ajụjụ, ee - Ee, ee, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ihe fọdụrụnụ abụghị nke m. (chịrị ọchị) - Ekwenyere m. Ya mere, ozi buru ibu, ana m ahọrọ HelloFresh n'elu Blue Apron Ezi ntụziaka dị ntakịrị mma, echere m na ogo nri dị ntakịrị mma mana m ga-ekwu ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-eri ọtụtụ ma ọ bụ na-atụtụ ọtụtụ, ga - azọpụta gị ego site na ọrụ, n'ọtụtụ oge ọ bụ nzuzu.
Na-eri nri, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, ụdị usoro nri dị iche iche mara mma nke ị gaghị enwe ike ịnweta. Ọ bụrụ na ị dị mkpụmkpụ oge, ọ dị mma. Ọ bụrụ na ị nwere obere ego, nke a abụghị ọrụ maka Ma ugbu a, ọ bụ oge maka $ 50 Amazon Onyinye Kaadị (kụọ aka gị) Onye mmeri, ị bụzi onye mmeri, naanị nkwado email @ mattsdailydeals.com iji nweta $ 50 Amazon n'efu kaadị onyinye.
Ee! (Drumming) Oh, i kwesiri ime ihe eji egwu egwu tupu inye ihe a, woops my bad guy, i meriri, ekele. Na ihe ncheta, ịchọrọ ijide n'aka na ị gaghị echefu onyinye ọ bụla ma ọ bụ onyinye ọ bụla ga-eme n'ọdịnihu. E nwere ụzọ dị mfe ịdenye aha.
Naanị pịa isi m ebe a ịdenye aha na ọwa. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka iji mee ka ọkwa gị rụọ ọrụ ma ọ bụ hapụ okwu, mfe, ngosi, n'elu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ onyinye ikpeazụ anyị nyere pịa pịa ebe a.
HelloFresh kwesịrị ya?
Ha dị ntakịrị ọnụ n'etiti dollar 8 na 10 maka otu otu ọrụ, mana nke ahụ bụkwa ihe ị nwere ike ịkwụ ụgwọ maka nri na ebe a na-ere nri ngwa ngwa ma ọ bụ ụlọ ahịa sub. Ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ ịnweta ngwa ngwa, ahụike dị mma n'ebe ndị ahụ adịghị mma,Ndewo ohuruzuru oke.07.12.2019
Ọnye na-bụ HelloFresh lekwasịrị ahịa?
Dabere naNdewo ohuru,lekwasịrị anyaahịa isi bụ n'ozuzu n'etiti afọ 30 na 50. Ndị a ndị mmadụ na-enwe a-arụsi ọrụ ike si ebi ndụ na pasent 80 nkendị ahịabụ ụmụ nwanyị.03.12.2016
HelloFresh ọ na-enweta uru?
Ndewo ohurunyefere ihe karịrị 600 nde nri n'ụwa niile na 2020, na-ewepụta ntụgharị ego zuru ezu nke ijeri euro 3.75. E jiri ya tụnyere otu afọ tupu mgbe ahụ, nke a bụ uto nke 111 pasent. Gbanwee nnukwu ọrụuru(AEBITDA) ruru nde euro 505,2, ihe karịrị okpukpu iri (!)02.03.2021
Ndi Green Chef nwere nke oma ohuru?
Ndewo ohuruSE (HFG) kwuputara taa ọ nwetaraGreen siri nri, ụlọ ọrụ USDA nke akwadoro nri nri Organic.Ndewo ohuruga-enye ugbu a nnukwu nhọrọ nri maka ndị na-eri nri, na-agbakwunyeGreen siri nri siewu ewu na ahịhịa ndụ na-enweghị nri, gụnyere atụmatụ ndị a na-ekwenye na nri Paleo na Keto.
Kedụ ka ahụike dị ọhụrụ Hello Fresh?
Ọtụtụgbasiri ikeNtụziaka àjà naNdewo ohuruna ha anọgide “nnọọezi, ”Uto ọnụ ọgụgụ mere ka ọ bụrụ ọrụ kacha enye onyinye na ule anyị. Ná nkezi, usoro nri bụ nke kachasị dị obere na abụba (tie na Green Chef), calorie na sodium n'etiti ọrụ nnyefe nri ise na ule anyị.Ọgọst 24 2016
Ego ole ka ndewo ohuru maka onwa abuo?
Ndewo ohuru ugwontakịrị ihe, ọzọ naabụọ-person na 4-ndenye aha nhọrọ na nri 3 kwa izu. Iheabụọ-Plan atụmatụ bụ $ 69 kwa izu ($ 11.50 kwa onye) na atụmatụ ezinụlọ bụ $ 129 kwa izu ($ 10.75 kwa onye). Ejiriọnụahịadabere na ọnụọgụ nke mbadamba ị na-enye iwu, nke nwere opekata mpe efere 4 kwa usoro / izu.Jenụwarị 29. 2015 g.
HelloFresh dị ọnụ ala karịa ịzụ ahịa nri?
Site n'echiche ego zuru oke, ọdịiche dị na abụọ n'ime ngwa nyocha atọ bụ ihe na-adịghị mma. Ma mgbe nri abalị nyere siteNdewo ohurudị ọtụtụ karịadị ọnụ karịaọ bụrụ na ị gara naụlọ ahịa, enwere kwa oge - oge gị, na nke onye ọ bụla ọzọ na-esi nri.Eprel 8 2016
Kedu ihe a na-akpọ showno na Shark Tank?
Mgbe ezinụlọ na-akpọrọ ụmụ ha gaa n'akụkụ osimiri, ịchọta ebe dị mma iji gbanwee ma ọ bụ pụọ na uwe ịsa ahụ nwere ike isi ike. Nke ahụ bụ ebe ngwaahịa Shelly nke ShowNo na-abata. ShowNo bụ akwa nhicha nke nwere mgbawa n'etiti ya, nke bụ ebe isi nwa gị gafere.
Enwere ngwaahịa adịgboroja na Shark Tank?
O di nwute, na ihe omuma ohuru biara nye ndi nduhie ohere iji ugha na-erigbu ndi na adighi anya. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ngwaahịa na-ekwu na ha adịla na 'Shark Tank,' nke ahụ abụghị mgbe niile.
Ndi ABC kwadoro Ahịa anklọ Ahịa Shark?
Anyị nwekwara ụlọ ahịa pụrụ iche Shark Tank na-egosipụta ngwaahịa ndị ị hụrụ wuru na Tank maka ire ere ndị ahịa. Onweghi nkwado nke ngwa ahia ndi ABC, ndi sharks ma obu ndi n’etinye ‘Shark Tank’. Biko rịba ama na ndepụta a ga-emelite kwa oge dị ka ngwaahịa ndị ọzọ na-apụta na ọhụụ ọhụrụ nke 'Shark Tank.'